नेपाली काँग्रेसको जन–मुक्ति सेनाले वि.सं. २००७ को कात्तिक २६ गते वीरगञ्ज कब्जा गरेर, जन–क्रान्तिको प्रारम्भ ग¥यो । केशवप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको नेतृत्वमा कात्तिक २६ र २७ को मध्यरातमा जन–मुक्तिसेनाको सशस्त्र दस्ताले विराटनगरको विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण ग¥यो । मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म बडाहाकिम भवनबाहेक विराटनगरका अरु सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा जन–मुक्तिसेनाले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । रूप विराटनगरको क्रान्तिकारी सरकारको प्रचार विभागले मङ्सिर १८ देखि दैनिक बुलेटिन ‘मुक्ति सन्देश’ को प्रकाशन प्रारम्भ ग¥यो । त्यसको सम्पादन, लेखन, समाचार सङ्कलन आदि सबै जिम्मेवारी तारिणीप्रसाद कोइराला र फणीश्वरनाथ रेणुले बहन गरेका थिए । जन–मुक्तिसेना कहाँ–कहाँ कसरी लडिरहेको छ, कति खतराहरूको आमुन्ने सामुन्ने उभिएर बी.पी. कोइराला र सुवर्ण शम्शेर कुन–कुन मोर्चामा पुग्नुभयो ? प्राणलाई बाजीमा राखेर लड्न जन–मुक्तिसेनालाई साहस र प्रेरणाको स्रोत के थियो, यी सबैलाई केलाएर त्यसको यावत विवरणहरू उनीहरूले ‘मुक्ति सन्देश’ मा दिइरहे । मुक्ति सन्देशलाई सबैले खोजी–खोजी पढ्न थाले । त्यसले तारिणी र रेणु अरु उत्साही भए । मुक्ति सन्देशलाई उनीहरू सबैतिर पु¥याउन चाहन्थे तर देशको राजधानी र केही जिल्लाहरू राणाहरूकै मातहतमा थिए । हुलाक निस्प्रयोजन अवस्थामा थियो । मुक्ति सन्देशलाई धेरै ठाउँमा पु¥याउन सम्भव थिएन । त्यसैले उनीहरूले रेडियो प्रशारणको योजना तयार पारे ।
उनीहरूले आफ्नो यो योजना मङ्सिर २६ गते बी.पी. लाई अवगत गराए । विराटनगरकै वायरलेशको प्रयोगले काठमाडौँभन्दा केही पश्चिमी भागसम्म पनि आवाज प्रवाहित हुनसक्थ्यो । त्यही वायरलेश सेटलाई उनीहरू रेडियोमा रूपान्तरण गर्न चाहन्थे । उनीहरूको योजना बी.पी. लाई उचित लाग्यो । त्यसको भोलिपल्ट पटनाबाट ट्रान्समिटर ल्याइयो । अर्को दिन मङ्सिर २८ गते विहान ८ बजेदेखि सटवेभ ४१ मिटर बैण्डमा– ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ को प्रशारण प्रारम्भ हुने सूचना सबैतिर दिइयो तर तारिणी र रेणुसित केवल एउटा वायरलेश सेटबाहेक रेडियो प्रशारणका अन्य कुनै साधन थिएनन् । २७ गते साँझ रेणुले जोगवनीको भजन मण्डलीबाट एउटा पुरानो हारमोनियम फेला पारे । रघुपति जुटमीलको एउटा कोठामा वायरलेश सेट राखेर, त्यो कोठालाई साउण्ड प्रुफजस्तो पारियो । २८ गते विहान ७ बजेतिर बी.पी. को बहिनी विजयालक्ष्मी र रानु अधिकारी रेडियो प्रशारणका सहयोगी बन्न आइपुगे । जन–क्रान्तिको प्रारम्भसँगै उनीहरू दुवै अस्पतालमा घाइतेहरूको हेरचाह गर्ने स्वयंसेविका थिए । उनीहरू वायरलेशमा कार्यरत दुई–तीन जनालाई राखेर केही पहिलेदेखि गाइने क्रान्ति गीतको रिहर्सल गरियो ।
मङ्सिर २८ गते विहानको ८ बज्यो । अपरेटर लामाले वायरलेश सेट मिलाए । तारिणीप्रसाद कोइरालाले माइक्रोफोनको अगाडि उभिएर भने– ‘जय नेपाल ! प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोबाट हामी नेपालको मुक्त क्षेत्र विराटनगरबाट प्रजातन्त्रको सन्देश सुनाउन लागेका छौँ । ’ त्यसपछि तारिणीले नेपालीमा र रेणुले हिन्दीमा समाचार वाचन गरे । अँग्रेजीमा विजयालक्ष्मीले वाचन गरिन् ।
‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ ले जन–क्रान्तिका सबै गतिविधिलाई आम जनतासम्म पु¥याइरह्यो । मानिसको भित्र, अन्तष्करणसम्म पुगेर झकझक्याउने तारिणीप्रसाद कोइरालाको क्रान्तिको स्पर्शशील सन्देशले, क्रान्तिबाट केही टाढा, तटस्थजस्तो बसिरहेका नेपालीलाई पनि क्रान्तिप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरायो । देशप्रतिको कर्तव्य बोध गरायो । कतिपय नेपालीहरू क्रान्तिमा समाहित हुन आइपुगे । प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोले सबैलाई साहस, उत्साह र थप प्रेरणा दिइरह्यो । राणातन्त्र प्रत्येक मोर्चाबाट प्रत्येक दिन हार्दै गयो । जन–मुक्तिसेना चारतारे झण्डा फहराउँदै अघि बढिरह्यो ।
तारिणीका कतिपय क्रान्ति गीतहरूले उत्साह र प्रेरणा मात्र होइन, सबैमा थप साहस पनि प्रवाहित गराइरहे । प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको पहिलो आवाज– ‘जय नेपाल !’ क्रान्तिको प्रतीक भएर गुञ्जिरह्यो । यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई– हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई सबैतिर प्रतिध्वनित गराइरह्यो । एक हातले राइफल र अर्को हातले माइक्रोफोन बोकेर, तारिणी दुवैतिरबाट लगातार गोली चलिरहेको बीच भागमा उभिएर, आफ्ना स्रोताहरूलाई क्रान्तिको यथार्थ विवरण दिइरहन्थे । कतिपय स्रोताहरूले अनेकपटक दुईतिरबाट आएको राइफल र टु इञ्च मोटरको आवाजले रेडियो सेट नै हल्लाइदिएजस्तो अनुभव गरेका थिए ।
पुस १४ गते प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको प्रसारणलाई वडाहाकिम भवनमा सारियो । त्यस बेलासम्म रानु अधिकारीका कतिपय गीतहरू सुन्ने स्रोताहरूको सङ्ख्या निकै पुगिसेकेको थियो । निर्झर, राजेन्द्रप्रसाद, शान्ति मास्के आदि यसका थप सहयोगी भएर आइसकेका थिए । विहान ८ बजे, अपरान्ह २ बजे र साँझ ६.३० बजे पूर्वी नेपालको, उपत्यका र पश्चिम नेपालको पनि कतिपय भागको असङ्ख्य स्रोताहरू प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको आवाज सुन्ने उत्सुक प्रतीक्षामा पर्खिरहन्थे ।
एकतन्त्रीय राणाशासनलाई समाप्त पारेर २००७ को फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । सबै क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनसितै नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको थियो । प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ कार्यहरू कार्यान्वयन भइरहेका थिए । प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको प्रसारणलाई २००७ को चैत्र २० गते देखि विराटनगरबाट काठमाडौँमा सारियो । राणाका बाल–बालिकाको पठन पाठन हुने स्कुल भनिने भवनबाट यसको प्रसारणको व्यवस्था गरियो । अहिले पनि यही भवन र यसैको परिसरमा बनेका नयाँ भवनहरूमा यसको प्रसारण भइरहेको छ ।
यसको डाइरेक्टर तारिणीप्रसाद कोइराला थिए । यसको प्रमुख सहयोगीहरू– तत्कालीन प्रचार विभागका डाइरेक्टर वालकृष्ण सम, उनको छोरी रश्मि राज्यलक्ष्मी शाह, छोरा जनार्दन सम, हरिप्रसाद रिमाल, किशोरी देवी, श्यामदाश वैष्णव, नातिकाजी, उही गोविन्दबहादुर गुरुङ, पुष्प नेपाली, भैरवबहादुर थापा आदि थिए । शक्तिशाली ट्रान्समीटर थपेर यसलाई देशको धेरै भागमा सुन्न सकिने स्थितिमा पु¥याइयो ।
त्यसभन्दा केही पहिले २००७ को फागुन ७ देखि मात्र नेपालको प्रथम दैनिक ‘आवाज’ को प्रकाशन सुरु भएको थियो तर अरु कतिपय कठिनाइका कारण कुनै पनि पत्रपत्रिकाको देशको सबैतिर पुग्न सक्ने स्थिति थिएन । सूचनाको प्रवाह सानो घेराभित्र खुम्चिएर रहेको, सबै कुराको अन्योलजस्तो स्थितिमा प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोले विराटनगरको आवाजलाई देशको राजधानी काठमाडौँमा लिएर आयो । यसले सबैलाई देशमा के भइरहेछ, त्यो जान्न र त्यसप्रति चनाखो भएर रहन अभिप्रेरित ग¥यो । देशको यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याएर जनताको सुसूचित हुने हकको संवद्र्धन गरिरह्यो । प्रजातन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वासको वृद्धि गराउँदै लग्यो । यसले नेपाली भाषालाई अझ परिस्कृत गर्ने, गायन र सङ्गीतको विकास गर्ने एवं नाटक, कविता, कथा आदि विभिन्न विधाहरूको श्रीवृद्धि गर्ने र तिनीहरूको प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यलाई ठूलो सहयोग पु¥यायो । यसले नेवारी भाषामा पनि समाचार प्रसारण गरेर देशको अरु भाषाहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई उजागर ग¥यो । लोकगीत र लोक संस्कृतिको अन्वेषण र उत्थानमा ठूलो योगदान दियो ।
काठमाडौँबाट प्रसारण सुरु भएको केही पछि यसले साप्ताहिक बुलेटीन– ‘झन्कार’ प्रकाशित ग¥यो । बालवाटिका, छात्र कार्यक्रम, नारी, सैनिक र पुलिस आदि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यसले आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै, लोकप्रियता हासिल गर्दै गयो । २००८ को असार १५ गते यसलाई– ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ बाट– ‘रेडियो नेपाल’ मा रूपान्तरण गरियो । विहान र साँझको प्रसारण अवधिलाई वृद्धि गरेर यसले दिउँसो पनि प्रसारण सुरु ग¥यो ।
२०१६ को जेठ १३ गते बी.पी. कोइरालाले प्रथम जन–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट उहाँले रेडियो नेपालबाट आफ्नै आजावमा देशवासीलाई सन्देश दिनुभएको थियो । २०१६ को मङ्सिर १८ का दिन रेडियो नेपालको प्रसारणलाई अझ व्यापकता दिन पाँच किलोवार्डको नयाँ ट्रान्समीटर जडान गरियो । बी.पी. ले २००७ को जन–क्रान्तिको मोर्चामा यसको स्थापना भएको स्मरण गर्दै, छिट्टै अष्टे«लियाको सहयोगमा १० किलोवाटको ट्रान्समिटर आउने र त्यसको जडानपछि रेडियो नेपाललाई सबै नेपालीले सुन्न सक्नेछन् भन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री आफैँले प्रत्येक १५ दिनमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेर देशको वस्तुस्थिति उनीहरूलाई जानकारी गराउने गरिएको थियो । २०१६ को पुस १६ देखि रेडियो नेपालले पाक्षिक– ‘प्रेस रेडियो इन्टरभ्यू’ सञ्चालन ग¥यो । गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायसँगको पहिलो अन्तर्वार्ताबाट त्यसको शुभारम्भ गरिएको थियो । अरु मन्त्रीहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहे । त्यसकालमा रेडियो नेपाल जनताको सुसूचित हुने हकको संवद्र्धन गर्ने एक विश्वसनीय माध्यमको रूपमा रह्यो ।